အထက်ဘုံ – ဗြဟ္မာ ၂၀။
တတိယဈာန် ၃ ဘုံ
ပရိတ္တသုဘာ ၁၆ ကမ္ဘာ
ယာမာ နှစ်ပေါင်း တစ်ဆယ့်လေးကုဋေနဲ့ လေးသန်း။
(၁ ရက်= လူနှစ် ၂၀၀ ညီမျှ၏။)
နိမ္မာနရတိ နှစ်ပေါင်း နှစ်ရာ့သုံးဆယ်ကုဋေနဲ့လေးသန်း။
(၁ ရက်= လူ နှစ် ၈၀၀ နှစ်)
ရည်ညွန်း….အလုံးစုံသောတရားတို့ကို ကိုယ်တိုင်မှန်စွာ သိမြင်တော်မူသော ဂုဏ်တော်(၆) ပါးသခင် ထိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအား…..
I cannot find the topics you mentioned, so could you please refer that topic for me? Thank you!